theZOMI: [moemakadaily@moemaka.biz] 25th Mar - MoeMaKa Daily
[moemakadaily@moemaka.biz] 25th Mar - MoeMaKa Daily
Posted by Maung Yit at 8:48 PM0comments
Paris Maung - Learning French 7
VERBE "AVOIR" နှင့် သက်ဆိုင်သော သုံးစွဲပုံများ
ပေးခဲ့ပါသည်။ ဒါကြောင့် အရင်ဆုံး မိမိမှာရှိခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသူများ မှာ တစုံတခု ရှိခြင်းကို ပြဆိုဖို့ အတွက် အဲဒီ ကြိယာတွေက်ို အသုံးပြုပြီး စာကြောင်း တွေကို ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြည့်ပါ။
ဥပမာ --- J'ai une pomme. ရေ အယူးန်း ပေါ်မ်း ။ ကျနော့်မှာ ပန်းသီးတလုံး ရှိသည်။ ကိုပြောမယ်ဆိုပါစို့ ....
je ဆိုတဲ့ ကတ္တား နဲ့ ဆိုင်တဲ့ avoir အာ ဗွား ၊ ရှိသည် မူရင်းကြိယာကို Conjugaisonလုပ်လိုက်တော့ ai လို့ရပြီနော် ။ ဒါပေမဲ့ je ai လို့ သုံးလို့မရဘူး။ သရ ၂ လုံးထပ်နေတယ်။
ဒါကြောင့် ရှေ့က je မှာရှိတဲ့ "e" ပြုတ်သွားပြီး J'ai လို့ ဖြစ်လာရတယ်။ ပန်းသီးကို အဘိဓါန်မှာ ကြည့်ပါ။
n/f (noun / Féminin) လား n/m ( Noun / Masculin ) လား၊ အကြမ်းအားဖြင့်"e" နဲ့ဆုံးတဲ့ Noun တွေဟာ n/f ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် une pomme ကို ရွေးရမယ်။ နောက်ပြီး ပန်းသီးဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ ကို စပြီးပြောတာ ဖြစ်လို့ une ကို သုံးရပါမယ်။
Elleaune chemise. အယ် လာ အယူးန်း ရှမီးဇ် ။ သူမမှာ အင်္ကျီတထည်ရှိသည်။
Nous avons une maison. နူ ဇာဗွန် အယူးန်း မေဇွန် ။ ကျနော်တို့မှာ အိမ် တလုံးရှိသည်။
Nous avons des livres. နူ ဇာဗွန် ဒေ လိဗ်ရ် ။ ကျနော်တို့မှာ စာအုပ်တွေ ရှိသည်။
Ilaun chien. အီ လာ အန် ရှန်း ။ သူ့မှာ ခွေးတကောင်ရှိသည်။
Tu as trois stylos. ကျူ အာ တွာ စတီလို ။ မင်းမှာ၊ခင်ဗျားမှာ ဘောပင် ၃ ချောင်းရှိသည်။
Vous avez un stylo. ဗူဇာဗေ အန် စတီလို ။ ခင်ဗျား မှာ ဘောင်းဘီ တထည် ရှိသည်။
Elleaun sac. အယ် လာ အန် ဆာ့ခ် ။ သူမမှာ အိတ်တလုံးရှိသည်။
အနည်းကိန်းဖြစ်လျင် il /elle အများကိန်းဖြစ်လျင် ils/elles အနေနှင့် ယူဆပြီးဆိုင်ရာ Verbe "Avoir" ၏ Conjugaison ဖြင့်တွဲသုံးရပါမည်။
La voitureaun drapeau. လာ ဗွာကျူး အာ အန် ဒရာပို ။ ကားမှာ အလံတခုရှိသည်။ နောက်တနည်း ပြောတာ ကို ကြည့်ပါ ။ J'ai une voiture, elleaun drapeau. ရေ အယူးန်ဗွာကျူး ၊ အယ်လ်လာ အန် ဒရာပို ( ဒီနေရာမှာ elle ဆိုတာက ကားကို သုံးနှုံးပြောဆိုတာပါ ) ကျနော့်မှာ ကားတစီးရှိတယ်၊ သူမမှာ အလံတခုရှိတယ် ။
L'ordinateuraun écran. လော်ဒီနာတာ အာ အန် နေ ခရွန် ။(un écran အသံဆက်)ကွန်ပြူတာမှာ မှန်သားပြင် တခု ရှိသည်။
L'orangeades pépins. ( pépin= n/m: အစေ့ graine) လောရော့ရှ် အာ ဒေ ပေပန်း ။ လိမ္မော်သီးမှာ အစေ့များရှိသည်။
Les oiseaux ont des ailes. ( aile= n/f တောင်ပံ ) လေဇွားဇိုး အွန့် ဒေဇိုင်းလ် ။ ငှက်များမှာ အတောင်ပံများရှိသည်။ ( un oiseau= အန်နွားဇိုး ၊ ငှက် တကောင် )
Nous avons des livres. နူ ဇာဗွန် ဒေ လိဗ် ၊ကျနော်တို့မှာ စာအုပ်တွေရှိတယ်
EXPRESSION AVEC VERBE "AVOIR"
အေက်ပါလင့်တွင်ပေးထားသော အကြောင်းအရာများကို VERBE "AVOIR" နှင့်သာသုံးပြီးပြောဆိုရပါမည်။
J'ai faim. ကျနော်၊ ကျမ ဗိုက်ဆာတယ်။ Nous avons faim. ကျနော်တို့ ၊ ကျမ တို့ ဗိုက်ဆာတယ်။
၂။ ရေဆာခြင်း ကိုပြောရာတွင် သုံးသည်
Elleasoif. သူမ ရေဆာသည်။ ( Exercise : J'ai soif/ Nous avons soif / Vous avez soif )
Tu as chaud. မင်း ၊ခင်ဗျား အိုက်တယ်( ပူတယ်) စာကြောင်းအဆုံးမှာ အသံကို မြှင့်ပြီးပြောရင် အမေးဝါကျဖြစ်သွားပါမယ်၊ မင်းအိုက်နေလား ? ။ Tu as chaud? Vous avez chaud?
Vous avez froid. မင်း၊ ခင်ဗျား အေးနေတယ်၊ (အသံမြှင့်ပြောရင် ခင်ဗျားချမ်းနေသလား ?လို့ရပါတယ်)
Elleapeur. သူမ ကြောက်သည်။ ( ဒီနေရာမှာ ကျနော်က ထပ် ဖြည့်စွက်ချင်ပါတယ်၊Preposition ဝိဘတ် ဖြစ်တဲ့ "de" နဲ့" noun" နမ် ကို ထပ်ထဲ့ပြီး စာကြောင်းကို ပြည့်စုံစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို Complément လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပြင်သစ် စကားလုံး အသုံးအနှုံးများ ကိုရင်းနှီးစေရန်၎င်း ၊ ဗမာလို ဖေါ်ပြရန်ခက်ခဲမှုကြောင့် ၄င်း ၊ အခေါ်အဝေါ်ကို မဖေါ်ပြထားလျင် နားလည်နိုင်ပါရန်) Elleapeur de nuit. သူမ ည အမှောင်ကို ကြောက်သည်။ Elleapeur de voleur. သူမ သူခိုးကို ကြောက်သည်။
J'ai peur de regarder les films d'horreur. ကြောက်မက်ဖွယ်ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရန် ကျနော်၊ကျမ ကြောက်သည်။
Elles ont de la chance. သူမတို့ ကံကောင်းကြသည်။ J'ai de la chance.
J'ai raison. ကျနော်၊ ကျမ မှန်သည် ( မဟုတ်ဝါကျ négatif အနေနှင့် ပြောဆို၍ ရသည်ကိုလည်း သတိပြုပါ ) မှားသည်ဟု ပြောခြင်းထက် မှန်ခြင်း၊ မမှန်ခြင်းကို အထူးပြု၍ ပြောဆိုခြင်း အတွက်။
Ilasommeil. သူအိပ်ငိုက်တယ်။ J'ai sommeil .
၉။ အလိုရှိကြောင်း ကိုပြောရာတွင် သုံးသည် ( besoin de ....အလိုရှိသည်)( + Noun or Verbe)
Ilabesoin d'argent. သူ ငွေလို နေသည်။
Elleabesoin de dormir. သူမအိပ်ချင်တယ် ၊ သူမ အိပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ besoin de ရဲ့အနောက်မှာ Verbe Infinitif လို့ခေါ်တဲ့ မူရင်းကြိယာလိုက်တာ ကို သတိပြုပါ။ Preposition"de" နဲ့ " à " တို့ရဲ့ အနောက်မှာ အမြဲတမ်း Verbe Infinitif လို့ခေါ်တဲ့ မူရင်းကြိယာ သာလျင် လိုက်ရပါမယ်။
ဥပမာ - J'ai besoin de voyager. ရေ ဘဇွမ်း ဒ ဗွားရာဂျေ ။ ကျနော် ခရီးထွက်ဖို့ လိုအပ်တယ်
Elleabesoin de manger. အယ် လာ ဘဇွမ်း ဒ မောန် ဂျေ ။ သူမ အစား စားရန် လိုအပ်သည်။
Nous avons besoin de travailler. နူဇာဗွန် ဘဇွမ်း ဒ ထရာဗိုင်ရေ ။ ကျနော်တို့၊ကျမတို့အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ( အလုပ်လုပ်ရမည်။)
Ilaenvie de manger. သူစားချင်တယ်။ Nous avons envie de visiter La France. ကျနော်တို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံကို လည်ချင်တယ်။ J'ai envie de rentrer La Birmanie. ကျနော်၊ကျမ မြန်မာပြည် ကို ပြန်ချင်သည်။
As-tu envie d'une glace? မင်း ရေခဲမုန့်တခု လိုချင်သလား၊ (စားချင်သလား ဆိုပြီး ရေးလို့လဲရပါတယ်)
Ilaenvie d'une glace. သူရေခဲမုန့် တခု လိုချင်ပါတယ်။
1. Nous avons .... maison.
2. Ellea.... stylo.
3. Tu as .... livres.
4. Ils ont .... voiture.
5. Ila.... . ordinateur.
6. Vous avez .... enfants.
7. Mg Mga.... pantalon.
8. Sophie et Philippe ont .... chien. Sophie နဲ့ Philippe တို့မှာ ခွေးတကောင်ရှိသည်။
9. J'ai ...... pomme.
10. Kathrinea...... jouets.
ပြင်သစ်သံ သီချင်းလေး နားထောင်ဖို့ Lara Fabien ရဲ့ Je t'aime ဆိုတဲ့ သီချင်းလင့်လေးပေးလိုက်ပါတယ် ။ တခုက စာသားအတွက်ပါ။ I Love You လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ် ။
Posted by Maung Yit at 4:21 PM0comments
Labels: French, Paris Maung, Technology
Private daily newspaper in Burma ready
ပုဂ္ဂလိက နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ လာမည့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင် အစမ်းထုတ်ဝေခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် အပတ်စဉ် သတင်းဂျာနယ်တိုက်အချို့တွင် အစမ်းထုတ် သတင်းစာများ တိုက်တွင်း ထုတ်ဝေခြင်းဖြင့် ပြင်ဆင်လျှက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ရွှေနိုင်ငံ ပုံနှိပ်စက်လုပ်ငန်းမှ ရွှေနိုင်ငံသစ် အမည်ဖြင့် နေ့စဉ် အစမ်းထုတ် သတင်းစာကို ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်အတွင်း အစမ်းရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေ ခဲ့သကဲ့သို့ The Voice Daily ဟု အမည်ပေးထားသည့် Living Color Media မှ ထုတ်ဝေမည့် နေ့စဉ်သတင်းစာကိုလည်း ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်တွင် အစမ်းရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေ ခဲ့သည်ကြောင်း သိရှိရသည်။
နေ့စဉ် ထုတ်သတင်းစာများ အနေဖြင့် တစ်စောင်လျင် ကျပ် ၂၀၀ အောက်ဈေးနှုန်းဖြင့် ဖြန့်ချိမည် အလားအလာရှိကာ ရွှေနိုင်ငံသစ် နေ့စဉ်မှာ သတင်းစာတန်ဖိုးကို ၁၅၅ ကျပ်ဟု ဖေါ်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ယခုထုတ်ဝေမည့် ပုဂ္ဂလိကနေ့စဉ် သတင်းစာများမှာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ပြန်လည်ထုတ်ဝေခွင့်ရမည့် နေ့စဉ် သတင်းစာများဖြစ်သဖြင့် ပုံနှိပ်သတင်းမီဒီယာ နယ်ပယ်မှ စိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ယခုလက်ရှိ အချိန်ထိ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာထုတ်ဝေခွင့်လျှောက်ထားသူများ အနက်မှ ၈ စောင်ကိုခွင့်ပြုထားကြောင်း ယခုလဆန်းပိုင်းက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ အခြား လျှောက်ထားသူ တဒါဇင်ထက်မနည်းရှိပြီး မကြာမီထပ်မံ ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟု ရန်ကုန် သတင်းမီဒီယာ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ခန့်မှန်းထားကြသည်။
Posted by MMK@YGN at 10:32 AM0comments
Dr. DamaPyiya (ITBMU) - Articles
သရုပ်ဖော်ပန်းချီ - ပေါ်ဦးသက်
အနော်ရထာမင်းကြီးဟာ ဘုရားလက်ထက်က မဟာနာမ်မင်းကြီးကို အားကျအတုယူထားတဲ့ ရှင်ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တာကြောင့် သာသနာတော်အရေးဟာ တိုင်းပြည်အရေးဖြစ်သလို၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးဟာလည်း သူ့အရေးဆိုတာ မမှိတ်မသုံ ယုံကြည်ထားသူဖြစ်တယ်။ ဘုရားလက်ထက်က မဟာနာမ် မင်းကြီးဆိုတာ - ̏အကယ်၍များ အကြောင်းတစ်စုံတခုကြောင့် ပရိတ်သတ်လေးပါး (ရဟန်းယောက်ျား၊ ရဟန်းမိန်းမ၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာမများ) နှင့် ပြည်သူ၊ ပြည်သားများကတစ်ဖက် ဘုရားရှင်ကတစ်ဖက် ဖြစ်နေခဲ့မည်ဆိုလျှင် ဘုရားရှင်ဖက်မှာပဲ အမြဲတမ်း ရှိနေမှာပါ˝ လို့ ဘုရားရှင်အား ရဲရဲတောက်စကားကို လျှောက်ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ရှင်ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့် အနော်ရထာမင်းကြီးဟာ သူဆောင်ရွက်သမျှ ကိစ္စအ၀၀အတွက် ဘုရားကို ̏အရှင်˝၊ သံဃာကို ̏သခင်˝အရာမှာထားပြီး၊ အရှင်ဟောသမျှကို နာခံ၊ သခင်ညွှန်ကြားသမျှကို လိုက်နာနေခဲ့တဲ့ ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်နေခြင်းပါ။ သံဃာတော်များအပေါ်မှာ ကျိုးနွံသည့် စိတ်ထားရှိပြီး၊ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ ဖြူစင်မွန်မြတ်တဲ့ စေတနာတို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို စုစည်းညီညွတ်တဲ့ နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံအဖြစ် အစပျိုးထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှစ၍ ယခုအချိန်အထိ မြန်မာဆိုတဲ့ သမိုင်းခြေရာများဟာ ထင်ထင်ရှားရှား ထင်ကျန်နေခဲ့တယ်။
ခေတ်မှီတဲ့ပညာရေးစနစ်နှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား အထက်တန်းပညာရေးကို တပြေးညီ သင်ယူနိုင်ရန် အောက်ပါအချက်များကို အလျင်အမြန် အကောင်အထည်ဖေါ်ပေးနိုင်ဖို့ပါ။ ထိုအတွက် အဓိကအချက်သုံးချက်မှာ - (၁)အထက်တန်းပညာကို မသင်မနေရ ပညာရေးမျိုးဖြစ်အောင် နိုင်ငံတော်မှ ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ (၂) အထက်တန်းပညာရေးကို အခမဲ့သင်ကြားပေးနိုင်သော ပညာရေးမျိုးအောင်ဖြစ်အောင် နိုင်ငံတော်မှ ဆောင်ရွက်ပေးရန် (၃) ပညာကို သင်ကြားပေးရာ၌ စာသင်ခန်းအတွင်းမှာပင် တပည့်များကို သင်ခန်းစာများနှင့်ရင်းနှီးအောင်၊ နားလည်အောင်၊ သင်ကြားတတ်မြောက်အောင် သင်ပေးပြီး ကျူရှင်မလိုတဲ့ ပညာရေးမျိုးဖြစ်အောင် နိုင်ငံတော်မှ ဆောင်ရွက်ပေးရန် အကြံပြုလိုခြင်းပါ။ (ရေတိုစီမံကိန်းမျိုးမဟုတ်ပဲ၊ ရေရှည်စီမံကိန်းများ ဖြစ်လာနိုင်စေရန် အကြံပြုတင်ပြခြင်းပါ။)